श्रम स्वीकृतिबारे आज निर्णय
काठमाडौं : सरकारले वैशाख २३ गते अर्थात आगामी बिहीबारदेखि लागू हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको भएपनि वैदेशकि रोजगार विभागले सोमबारसम्म श्रम स्वीकृति रोकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी महेन्द्र प्रसाद भट्टराईले त्यस विषयमा छलफल गर्न मंगलवार बैठक राखिएको मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकलाई जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको अवस्थामा श्रम स्वीकृति प्रक्रिया जारी राख्नु उचित नहुने श्रोतले बतायो । गन्तव्य देशमा कोरोना महामारी शुरु भएपछि गएको वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडान राकिनु ९ दिन अघि नै श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति दुबै रोकिएको थियो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा म्यानपावर कम्पनीको ईजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक एक सय जना कामदार अनिवार्यरुपमा पठाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकेपछि ऐन र नियमावलीमा ईजाजत नवीकरणका लागि संख्याको तगारो राख्न नहुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको चर्को दबाब रहेको छ ।
गत साता विदेशमा ११ संक्रमित नेपालीको निधन
काठमाडौं : गत साता कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण भारतमा थप १० जनासहित बिदेशमा ११ नेपालीको निधन भएको गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ । हालसम्म भारतमा मात्रै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ७१ पुगेको छ । गत साता साउदीमा पनि थप एक जनाको संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको स्वास्थ्य समितिको शनिबार साँझसम्म तयार पारेको तथ्यांक अनुसार भारतसहित विश्वभर २१ मुलुकमा रहेका ३ सय ८२ जना नेपालीको कोभिड १९ का कारणले निधन भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा सन्जिव सापकोटाका अनुसार भारतमा २० हजार भन्दा बढी नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । ती मध्ये १७ हजार भन्दा बढी कोरोनामुक्त भएका छन् ।
अघिल्लो साता मलेसिया, भारत, कुवेत, यूएई र साउदी अरेबियामा रहेका नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो ।
यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष तथा ‘कोभिड १९’ उच्चस्तरीय समितिका संयोजक कुमार पन्तलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । संघको सक्रियतामा निर्माण भएको गोर्खास्थित एनआरएनए नमुना बस्ती हस्तान्तरण, नेपालमा १० अर्ब लगानी लगायतको परियोजनालाई मूर्तरुप दिन विगत केही सातादेखि नेपाल भ्रमणमा रहेका पन्तलाई आइतबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
नेपाल, भारतसहित विश्वका विभिन्न देशमा देखापरेको नयाँ प्रजातिको महामारी अत्याधिक संक्रामक खालको भएकोले विशेष सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य समितिले आग्रह गरेको छ । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने, स्वाद र गन्ध हराउने, पखाला वा बान्ता हुने, एकदम थकान हुने, निद्रा लागिरहने, छालामा बिमिरा आउने, आँखा रातो हुने लगायतका लक्षण देखा परेमा तत्काल पीसीआर परीक्षण गर्न समितिले सुझाएको छ ।
नयाँ भेरियन्टको कोरोना भएमा परिवारमा सबै संक्रमित हुने अवस्था रहेकोले कुनै लक्षण देखिएमा सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न पनि समितिले अनुरोध गरेको छ ।
यस्तै मधुमेह र उच्च रक्तचाप भएका मानिसहरूलाई संक्रमण भइहालेमा अवस्था गम्भीर हुन सकने भएकाले उनीहरुले आफ्नो स्वास्थ्य र औषधि सेवनमा विशेष ध्यान दिन भन्दै समितिले पोषणयक्त खानेकुरा खाने, शारीरिक व्यायाम गर्ने, संक्रमित व्यक्तिहरूले घरमा अक्सिजन नाप्ने मिटर राखी बेलाबेलामा अक्सिजन नाप्दै अक्सिजन लेभल कम भए तुरुन्त स्वास्थ्य विज्ञसँग सल्लाह लिइहाल्न पनि सुझाएको छ ।
काठमाडौं : आगामी बिहीबारदेखि वैदेशिक रोजगार ठप्प हुने भएको छ । सरकारले वैशाख २३ गते लागू हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार रोकिने भएका हुन् ।
सरकारले राजधानीमा लगाएको निषेधाज्ञा आदेशको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने नरोकिने बताएको थियो । तर आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेपछि सरकारको यसअघिको वैदेशिक रोजगारमा जान नरोकिने निर्णय अर्थहीन बन्न पुगेको छ । नेपाली कामदारका गन्तव्य मुलुक खासगरी साउद, कतार, यूएईलगायतका देशमा अर्थतन्त्रले लय पक्रिँदा विदेशी कामदारको माग बढेपछि पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारले मध्यम गतिमा भएपनि लय समाउन थालेको थियो ।
सरकारले नेपाल र भारतबीच सातामा दुई वटा मात्रै उडान कायम राख्ने गरी सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेका कामदार समस्यामा परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश कामदारले फिर्ता नहुने सस्तो टिकट लिएका कारण उनीहरु समस्यामा पर्ने बताइएको छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदर मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्किनेहरु पनि समस्या पर्ने देखिएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएपछि स्वदेश फर्किने कामदारहरु दबाबमा रहेको र हवाई टिकट पनि महंगिएको बताइएको छ ।
यस पटकको उडान प्रतिबन्ध वैशाख मसान्तसम्म कायम रहने बताइएको छ । तर नेपालमा अस्वभाविकरुपमा बढेको कोरोना संक्रमितहरुको संख्याले अवस्था सामान्य हुन केही समय लाग्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । यसअघि २०७६ चैत ९ गतेबाट रोकिएको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु हुन २०७७ भदौ १७ सम्म पर्खिनु परेको थियो । त्यो पनि नियमित नभई चार्टर्ड उडानबाट हवाई उडान शुरु गर्दा कम आय भएका कामदार मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा थप संकटका दिनहरु आउँदै
काठमाडौं : नेपालमा तीव्ररुपमा फैलिरहेको कारोना भाइरस संक्रमणले वैदेशिक रोजगारमाथि पुनः संकट निम्त्याउने देखाएको छ । आइतबार नेपालमा ७ हजार २ सय ११ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो साताको तुलनामा संक्रमितको संख्या करिब १ सय ३७ प्रतिशत बढेको छ ।
नेपालमा संक्रमण तीव्ररुपमा बढिरहेको बेला अन एराइभल भिसा प्रदान गर्दै आएको सिंगापुरले आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी नेपालीलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा अस्थायी रोक लगाएको छ । सिंगापुर नेपाली कामदारको रोजगार गन्तव्य मुलुकको सूचीमा छैन । तर नेपालीलाई प्रवेशमा सिंगापुरले लगाएको अस्थायी प्रतिबन्धले रोजगार गन्तव्य मुलुकहरुले त्यसलाई पछ्याउने खतरा बढेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या निरन्तर घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या गत वर्षको तुलनामा करिब ७४.८ प्रतिशत गिरावट आएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ नेपालमा संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै जाँदा नेपाली कामदार लिने मुलुकले नेपालप्रति कडा नीति लिने खतरा रहेको बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि नै नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र धर्मराएको थियो ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा रोजगारी गुमाएका चार लाख ५० हजार ९ सय ५७ जना नेपाली कामदार स्वदेश फर्किएको बताएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी नेपालका प्रमुख रोजगार गन्तव्य मानिँदै आएका कतार र यूएईमा रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार रहेका छन् ।
मलेसिया नेपालीको आकर्षक रोजगार गन्तव्यको रुपमा रहँदै आएको छ । तर लामो समयदेखि उक्त मुलुकमा अन्य देशकासँगै नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जान पाएका छैनन् । स्थिति नियन्त्रणमा आए आगामी जुनबाट विदेशी कामदारका लागि ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको मलेसियामा पनि संक्रमण रोकिएको छैन ।
आवगमनमा नियन्त्रण गरेर कोरोनाको संक्रमण रोक्ने प्रयास गरेको मलेसियामा आइतबारसम्म ४ लाख १५ हजार १२ जना संक्रमित भएका छन् । थप १२ जना नागरिकको मृत्यु हुँदा मृतकको संख्या १ हजार ५ सय ३३ पुगेको छ । मलेसियामा बढेको संक्रमणको दरले जुनमा नयाँ रोजगारी खुल्ने सम्भावना देखिएको छैन । नेपालीहरुले मलेसियाको नयाँ रोजगारीका बारेमा तीव्ररुपमा चासो राखिरहेका छन् । तर क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले नयाँ कामदारको डिमाण्ड एप्रुभलको कुनै संकेत पाउन नसकिएको बताएको छ । क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने वाध्यताका कारण संक्रमणका बीच रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरुको पनि लगानी बढेको छ । नेपाली कामदारहरु आफ्नै खर्चमा कम्तीमा १० दिन होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने भएकाले लागत बढेको हो ।
खाडी र मलेसिया मात्र होइन, सरकारले भाषा परिक्षा उत्तिर्ण गरेका युवाहरुलाई रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने विषयमा कुटनीतिक क्षमता देखाउन नसक्दा दश हजार बढी रोजगार आकांक्षी युवाहरु राजधानीमा अलपत्र परेका छन् । दक्षिण कोरियाले पनि २०७६ फागुनबाट नेपाली कामदार रोकेको छ ।
सरकारले राजधानीमा लगाएको निषेधाज्ञा आदेशको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने नरोकिने बताएको छ । तर निषेधाज्ञाका कारण वैदेशिक रोजगारमा जान काठमाडौं आउनु पर्ने कामदार रोकिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
कुवेतमा गत वर्ष ५९ नेपालीको मृत्यु
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत गएकामध्ये गत वर्ष ५९ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मृत्यु हुने ५९ नेपाली कामदारमा ३८ जना पुरुष र २१ जना महिला कामदार रहेका छन् । कुवेतमा अवैधरुपमा पु¥याइएका नेपाली महिला ठूलो संख्यामा घरेलु कामदारको रुपमा रहेका छन् ।
सडक दुर्घटना, आत्महत्या, हृदयघात र क्यान्सर जस्ता रोगका कारण नेपालीले ज्यान गुमाएको बताइएको छ । कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष उक्त मुलुकमा १२ नेपालीको ज्यान गएको दूतावासका द्वितीय सचिव श्रीकृष्ण सिलवालले बताए । अवैधानिक मदिरा उत्पादन तथा बिक्री, हत्या तथा झैझगडाको अभियोगमा ४९ जना नेपालीहरु कुवेतका विभिन्न जेलमा रहेको दूतावासले बताएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण कुवेतमा थप नेपालीहरुले ज्यान गुमाउन सक्ने भन्दै नेपाली दूतावास र गैर आवासीय नेपाली संघ लगायतका संघसंस्थाले सतर्क रहन र एक आपसमा सम्पर्कमा रहन आग्रह गरेका छन् ।
कुवेतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण अझै पनि उच्च जोखिमको अवस्थामा छ । नेपालसहित ३५ देशबाट कुवेत जाने यात्रुहरुले १४ दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । क्वारेन्टिन खर्च कामदार वा यात्रु स्वयंले व्यहोर्नु पर्ने छ । त्यसका लागि न्यूनतम ६८ हजारदेखि अधिकतम १ लाख २७ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने छ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारहरुको अधिकार संरक्षण गरिने : प्रम ओली
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारहरुको अधिकार संरक्षण गरिने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको संक्रमणले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारको पीडामा आफ्नो पनि ऐक्यवद्धता रहको भन्दै श्रम सम्झौतका माध्यमबाट नेपाली कामदारहरुको अधिकार सुरक्षा गर्न सकिने बताए ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सदुपयोगले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको अधिकार रक्षामा भूमिका खेल्ने बताए ।
यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसमा कोरोना भाइरसको नया भेरियन्टका कारण विगतमा जस्तै औपचारिक कार्यक्रम नराखिए पनि विभिन्न ट्रेड युनियनले भर्चुअल माध्यमबाट स्वदेश तथा विदेशमा श्रम गरिरहेका कामदारहरुको अधिकार रक्षाका लागि छलफल गरेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का निर्देशक गाय राईडरले कोरोना भाइरसको प्रकोप अनुमान भन्दा बाहिर पुगेको भन्दै त्यसले स्वदेश तथा आप्रवासनमा रहेका कामदारमाथि जोखिम बढाएको भन्दै लाखौंले रोजगारी गुमाएको पीडादायी अवस्था रहेको बताए । महामारीले विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड दिएको भन्दै निर्देशक राईडरले समृद्धिका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मानवीयतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने भन्दै निर्देशक राईडरले त्यसका लागि सबैको सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा विश्व मजदुर दिवस मनाइएको थियो । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउने गरिएको छ । विश्वका मजदुरले यस दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । नेपालमा विराटनगरमा विसं २००७ मा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
एनआरएनए अल कासिमको अध्यक्षमा पुनः मियाँ
तिलु शर्मा पौडेल / मध्यान्ह
दोहा, कतार : गैरआवासीय नेपाली संघ साउदी अरबको मातहतमा रहेको क्षेत्रीय समन्वय समिति अल कासिमको चौथो अधिवेशनबाट रमजान दिन मियाँ २०२१–०२३ कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । उनी यसअघि पनि उक्त समितिको अध्यक्ष रहेका थिए ।
चौथो अधिवेशनबाट मियाँको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय नव निर्वाचित समितिको चयन भएको छ । कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कृष्ण अधिकारी, उपाध्यक्षमा बिष्णु रावल, सचीवमा ध्रुब कटुवाल, कोषाध्यक्षमा चिरञ्जीवी अर्याल, सह कोषाध्यक्षमा वीर बहादुर तमाङ, युवा संयोजकमा खिलेन्द्र राज कन्धवा, सदस्यहरुमा नुरुल जमा अन्सारी, बिनोद खड्का, सिद्दी श्रेष्ठ, रमन अर्याल, अर्जुन थापा, बद्री के.सी, अशोक सुवेदी चयन भएका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण जुम अनलाइन प्रविधिबाट समिति पदाधिकारीहरुको भौतिक उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाली दूतावास रियादका महावाणिज्य दूतावास जेद्धाका सत्रुघन पोख्रेल, आइसिसी मध्य पुर्व संयोजक राजेन्द्र अर्याल, आइसिसी सदस्य यास्मिन बेगम, आइसिसि सदस्य नारायण पास्वान, आइसिसी सदस्य रमेश भन्डारी प्रमुख अतिथिका रुपमा रहेका थिए भने एनआरएनएनसीसी अध्यक्ष तेज बहादुर थापा र एनआरएनएनसीसी उपाध्यक्ष तथा आरसीसी प्रमुख सल्लाहकार बिशाल कुमार श्रेष्ठ विशेष अथितिमा रहेका थिए । यसैगरी एनआरएनए एनसीसीका प्रमुख सल्लाहकार डम्बर यादब, साउदी अरबका उपाध्यक्षहरु, एनसीसीका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरु, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु र सञ्चारकर्मी अतिथि रहेका थिए ।
अध्यक्ष मियाँको सभापतित्व, सचिव विष्णु रावल तथा सहसचिव ध्रुब कटुवालद्वारा संचालित कार्यक्रममा संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । दुई चरणमा समापन गरिएको उक्त कार्यक्रममा पहिलो चरणमा सचिव विष्णु रावलले २०१८–२० कार्यकालको कार्य प्रगति प्रतिवेदन र वीर बहादुर तामाङले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा बन्दसत्र गरिएको थियो । बन्दसत्रले निर्वाचन बिशाल श्रेष्ठको संयोजकमा गठित निर्वाचन समितिले २०२१–२३ कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गराएको थियो । समितिले जुम प्रविधिमार्फत उम्मेद्वारी दर्तादेखि निर्वाचनको प्रक्रिया पूरा गराएका थिए । उमेदवारीमा दाबी विरोध नपरेकोले कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ठ अतिथि तथा अतिथिहरुले अल कासिम क्षेत्रीय समितिले गरेका सामाजिक सेवा कार्यको उच्च मुल्यांकन गर्दै नयाँ कार्यसमितिलाई अझै अगाडि बढ्न हौसलाका साथ शुभकामना दिए । एनआरएनए साउदी अरबको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा आफ्नो मातहतका स्थानीय समिति तथा क्षेत्रीय समितिहरुको अधिवेशन भइरहेको छ ।
कुन म्यानपावरले कति पठाए कामदार ?
काठमाडौं : चैत महिनामा २८ म्यानपावर कम्पनीले एक सयभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसमध्ये ४ सय ७५ जनाको अन्तिम श्रम स्वकृति लिएको स्काई स्टार रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि. धेरै कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको छ ।
दोश्रो नंम्बरमा रहेको सान नेपाल प्रा.लि.ले ४ सय ५२, तेश्रो नम्बरमा रहेको मोभिरा रिक्रुटमेन्ट कन्सल्ट सर्भिस प्रा.लि.ले ३ सय १३ जना, अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले ३ सय ८ जना, सूचीको पाँचौ नम्बरमा रहेको एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रा.लि.ले ३ सय ६ जना, छैठौ नम्बरमा रहेको दि रिभर ओभरसीज प्रा.लि.ले २ सय ९३, सातौं नम्बरमा रहेको फजल इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले २ सय ८२, आठौं नम्बरमा रहेको प्याराडाईज इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले २ सय ६८ जना, नवौं नम्वरमा रहेको अल शाहिद ओभरसीज प्रा.लि.ले २ सय ४३ र सूचीको दशौ नम्बरमा रहेको डाइनेष्टी ह्युमन रिसोर्स नेपाल प्रा.लि.ले १ सय ८५ जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
कुल ८ सय ५४ म्यानपावर कम्पनी दर्ता रहेका भएपनि चैत महिनामा ४ सय ७ म्यानपावर कम्पनीले मात्र कामदार पठाउन सकेका छन् । त्यसमध्ये १ सय ४९ म्यानपावर कम्पनीले दश जनाभन्दा कम कामदार पठाउन सकेका छन् ।
कोरोना महामारीका बीच चैतमा ३२ हजार बढी नेपाली कामदार विदेश उडे
काठमाडौं : कोरोना भाइरसको महामारीका बीच चैत महिनामा ३२ हजार भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । नेपाली कामदार जाने प्रमुख गन्तव्यहरुमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण आक्रामकरुपमा फैलिरहेको भएपनि चैत महिनामा विश्वका ७३ देशमा रोजगारीका लागि नेपालीहरु पुगेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चैत महिनामा ३० हजार ३५ जना पुरुष र २ हजार १ सय ७ जना महिला गरी जम्मा ३२ हजार एक सय ४२ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यसमा संस्थागत अर्थात म्यानपावर कम्पनीमार्फत १३ हजार ७ सय ४ जना गएका छन् । व्यक्तिगत प्रयासमा पहिलो पटक जाने कामदारको संख्या ७ सय ४७ रहेको छ । एक पटक विदेश गएर बिदामा घर आएर पुनः रोजगारीमा जानेको संख्या १६ हजार ६ सय ६ रहेको छ ।
चैत महिनामा म्यानपावर कम्पनीबाट ६ हजार १ सय २१ जना र रिइन्ट्री र वैधानिकीकरणका माध्यमबाट गरी चैत महिनामा १० हजार ३ सय ७६ जना साउदी अरब गएका छन् । यस्तै म्यानपावर कम्पनी मार्फत गएका ४ हजार ८ सय २१ सहित कतारमा ९ हजार ७ सय ४३ र म्यानपावर कम्पनी मार्फत गएका ६ सय ३३ जना सहित यूएईमा ७ हजार २ सय १ जना गएका छन् ।
चैत महिनामा साउदी अरब, कतार, यूएई, जापान, रोमानिया, ओमान, मरिसस, जोर्डन लगायतका मुलुकबाट २९ हजार ५ सय ८१ जनाको डिमाण्डमा पूर्व स्वीकृति भएको छ ।
एनआरएनएद्वारा भारतमा समस्यामा रहेका नेपालीका लागि हटलाइन सेवा
काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले भारतमा समस्यामा रहेका नेपालीहरुको सहयोगका लागि हटलाईन टेलिफोन सेवा शुरु गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. संजिव सापकोटाले तिब्र रुपमा बढ्दै गएको कोभिड १९ को प्रकोपबाट भारतमा ठूलो संख्यामा नेपाली प्रभावित भएपछि संघले स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले हटलाइन शुरु गरेको बताए ।
कोरोना भाइरस सम्बन्धी समस्यामा परेका नेपालीहरुले फोन, टेक्स्ट, भाइवर, ह्वाट्सएप, इमेल मार्फत त्यहाँ रहेका चिकित्सकहरुसँग सिधै सम्पर्क राख्न सक्ने संघले जनाएको छ । हटलाइनमार्फत नेपालीहरुले अतिआवश्यक बाहेकका सेवाहरु लिन सक्ने छन् ।
गैर आवासिय नेपाली संघमा आवद्ध डा. अरुण पौडेल, डा. अविरल निधी र डा. सागर पौडेल (नयाँ दिल्ली) र नेपालमा रहेका डा. प्रभावत अधिकारीको टोली खटिएको हो ।
हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण कारण भारतमा ६१ जना नेपालीको ज्यान गएको छ भने तीन हजार भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको बताइएको छ । भारतमा एकैदिन सवा तीन लाख कोरोना संक्रमित देखिएका छन् । त्यहाा हरेक दिन दुई हजार पाँच सय भन्दा बढीको मृत्यु भइरहेको छ ।